-Dhacdo Shiinaha FK605 Desktop Wareeg/Taper Boos dhigista dhalo calaamadeeyaha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Fineco
Calaamadeeyaha meelaynta dhalada Wareega/Taper ee miiska ee FK605
FK605 Mashiinka Calaamadaynta Dhalada Wareega/Taper waxay ku habboon tahay dhalada wareegsan, baaldi, calaamadaynta.
Hawlgalka fudud, wax soo saarka ballaaran, Mashiinnada waxay qaataan meel aad u yar, si fudud ayaa loo dhaqaajin karaa oo loo qaadi karaa wakhti kasta.
Operation, Kaliya ku dhufo qaabka tooska ah ee shaashadda taabashada, ka dibna badeecadaha dul saar mid-mid-qaadiyaha, calaamadinta waa la dhammeyn doonaa.
Waxaa lagu hagaajin karaa calaamadaynta calaamadda meel gaar ah oo dhalada ah, waxay gaari kartaa dabool buuxa ee calaamadaynta alaabta, sidoo kale waxaa lagu gaari karaa calaamadaynta hore iyo gadaal iyo calaamadaynta labanlaabka calaamadaynta.Si ballaaran loo isticmaalo baakadaha, cuntada, cabitaanka, kiimikooyinka maalinlaha ah, daawada, qurxinta iyo warshadaha kale.
Dulqaadashada calaamadaynta (mm) ±1
Awoodda (kumbuyuutar / daqiqo) 20 ~ 45
Cabbirka alaabta suuit (mm) φ25～φ120;H:25 ~ 150;waa la habeyn karaa
Summada duubista(mm) Aqoonsiga: ＞76;OD:≤260
4. Dhexroorka gudaha ee xudunta waa 76mm, dhexroorka dibaduna waa in ka yar 280mm, oo loo habeeyey hal saf.
Geli alaabada qalabka quudinta → Alaabta waxaa gudbiya suunka gudbinta → Dareemka alaabada ayaa ogaanaya badeecada → PLC waxay helaysaa calaamada badeecada oo u ogolow calaamadaynta waxqabadka mashiinka
2) Nidaamka hawlgalka: Shaashadda taabashada midabka, si toos ah interface interface fudud hawlgalka. Chinese iyo English la heli karo.Si fudud loo habeeyo dhammaan cabbirrada korantada oo ay leeyihiin shaqada tirinta, taas oo waxtar u leh maareynta wax soo saarka.
Hore: FK-SX Cache daabacaadda-3 mashiinka calaamadaynta kaadhka madaxa
Xiga: Qalabka Wareega/Taper ee Xawaaraha Sare ee Mobtarka FK606
Dhalo mashiinka calaamadaynta booska go'an
mashiinka calaamadaynta dhalada koofiyadda
mashiinka calaamadaynta dhalada muraayadda muraayadda
mashiinka calaamadaynta dhalada balaastikada ah
mashiinka calaamadaynta dhalada taper desktop
Mashiinka calaamadaynta dhalada wareegsan
Shaybaarka Wareega/Taper-ka Xawaaraha Sarreya ee Miiska FK606